JACAYLKII UU NEBIGU KA ERGEEYAY “NNKH “ | Haqabtire News
JACAYLKII UU NEBIGU KA ERGEEYAY “NNKH “
January 4, 2017 - Written by admin
Bariira waxa ay ahayd gabadh addoomad ah waxa ayna is qabeen nin addoon ah oo la odhan jiray “Muqiis”. kadib maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ay qoyskii iyada haystay u sheegeen haddii ay keento adduun ‘maal’ lagu xidhay in ay xorriyaddeeda siindoonaan.
Bariira waxa ay doonaysay maalkii lagu xidhay in ay dadka islaamka ah weydiisato. Waxa ay isa soo hortaagtay Caa’isha oo ahayd midka mid ah xaasaskii rasuulka ‘csw’. Intaa kadib Caa’isha waxa ayku tidhi: ‘anaa ku iibsanaaya, kadibna ku xoraynaaya, balse anigu aan yeesho dhaxalkaaga’, kaas oo ay rabeen in ay yeeshaan qoyskii iyadu ay addoonta u ahayd.
Waxaa arrinkii ku adkaystay reerkii Bariira haystay, kadib arrinkii waxa uu gaadhay rasuulkii Alle ‘scw’ waxa uuna yidhi: ‘Caa’ishaay iibso oo xoree, way iska hadlayaane, haddii ay sheegtaan kun shardi oo aanay bannayn Ilaahay iyo rasuulkiisu midh laga fulinmaayo’e, walaageedana adiga ayaa leh ee sidaa yeel’.
Arrinkii markii danbe khudbad ayuu kaga hadlay rasuulku ‘scw’ misaajidka, taas oo uu lahaa “waa maxay kuwan shardi ka dhigaaya wax aanay Alle iyo kitaabkiisa midna bannayn, arrinkasta oo aanay bannayn Ilaahay iyo rasuulkiisu waa baadil waxna ka soconmaayaan”
Gabadhii Bariira ahayd Caa’isha ayaa iibsatay, wayna xoraysay.
Bariira ninkeedu aad ayuu u jeclaa, inkastoo marka uu addoonku xorriyad helo, uu isagu ikhtiyaarka leeyahay in uu la sii joogo qofka kale iyo inuu iskaga tagaba
Gabadhii Bariira ahayd waxa ay tidhi: ‘anigu ninkan ma rabo kol haddii aan xoroobay sidaa ayaannu ku kala tagnay’.
Balse Ninkii Muqiis la odhan jiray waa uu samri waayay.
Waxa ayna culimada taariikhdu sheegaan inuu suuqyada Madiina joogi jiray isaga oo ilmaynaya oo dhareerku da’aayo, maxabbo iyo jacayl uu gabadhaasi u qabay dartood.
Muqiis gabadhaas aad ayuu u jeclaa, saxaabaduna waa ay ka nixi jireen marka ay arkaan ninkan ooyaya, waxa uu la ooyayaana ay tahay gabadh qalbigiisa degtay.
Ugu danbayntii ayaa nebigii “scw” waxa uu ka naxay ninkii, waxa uuna damcay inuu u ergeeyo ninkaas ama uu shafeeco u weydiiyo gabadhaas.
Gabadhii ayuu nebigu ‘scw’ u yimi, waxa uuna ku yidhi: Bariiraay ninkaas isku noqda oo isqaba, kadib Bariira nebiga su’aal ayay weydiisay ay leedahay: ‘Rasuul Alloow arrinkaa aad i faraysaa ma amarbaa mise waa talo?’. Bariira waxa ay eegaysaa in arrinkan uu nebigu u sheegaayo uu yahay mid waxyi ah iyo inkale, waayo waxyiga samada ka yimi doorasho ma laha. Kadib waxa uu u sheegay inaanu amar ahayn balse ay tahay talo uuna yahay ergay.
Gabadhii waxa ay tidhi: ‘haddii ay tahay talo, iska daa nebi Alloow – macnaha ku noqoshada ninkaas.
Sheekadani waxa ayku tusinaysaa in nolosha aanu jirin qasab iyo jujuubtoona,
balse ay tahay doorasho,
si uu usii jiro wadajirka iyo wada joogga qoysaska Islaamka ahi.